अशोक दर्जीको घरमा पहिलो पटक देउसी: अलमोडाले भट्याए टंक, डिजे रुपक र टिका पनि साथै (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > अशोक दर्जीको घरमा पहिलो पटक देउसी: अलमोडाले भट्याए टंक, डिजे रुपक र टिका पनि साथै (भिडियो)
अशोक दर्जीको घरमा पहिलो पटक देउसी: अलमोडाले भट्याए टंक, डिजे रुपक र टिका पनि साथै (भिडियो)
admin November 7, 2018 समाचार 0
नेपाली युट्युबको इतिहासमा झापाका अशोक दर्जी त्यस्ता एक्ला व्यक्ति हुन्, जसको एउटै गीतमाथि सर्वाधिक भिडियो बने । अहिलेसम्म उनको एउटै गीत मात्र रेकर्ड भएको छ— मनबिनाको धन ठूलो कि धनबिनाको मन, तर उनको गीतको चर्चा यति चुलियो कि त्यसको अनुमान कसैले गरेका थिएनन् । उनको चर्चासँगै विवाद पनि सुरु भैहाल्यो ।
युट्युबमा अशोक दर्जी टाइप गर्दा २६ हजार ९ सय रिजल्ट देखिन्छ । झापाका सडक तथा होटलहरूमा गीत गाएर गुजारा चलाइरहेका अशोकलाई केही युट्युबरले चर्चामा ल्याए । सुरुमा नवराज उप्रेती, नयाँ–नयाँ न्युज नेपाल र तात्तातो खबरले भिडियो बनाएपछि उनी चर्चामा आए । त्यसपछि डिजे रूपकले झापाबाटै अशोक दर्जीको गीत फेसबुक लाइभ गरे ।
अशोक दर्जीको घरमा पहिलो पटक देउसी भिडियो:
बिस्तारै उनी चिनिँदै गए । मोरङका पत्रकार किशोर श्रेष्ठको अगुवाइमा अशोक दर्जीका लागि कार्यक्रममार्फत केही रकम संकलन गरियो । झापामै उनको गीत रेकर्ड भयो भने दर्जीलाई उर्लाबारीस्थित बेथेल एजुकेसन एकेडिमीमा भर्ना समेत गरियो ।
झापाका सडकमा आफ्नी बहिनीको साथमा गित गाउँदै आशोक दर्जी
डिजे रूपक एवं गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीले काठमाडौं ल्याएर अशोक दर्जीको गीत रेकर्ड गराए । त्यसपछि भने सोसल मिडिया, युट्युब तथा अन्य मिडियामा उनको कभरेज चुलिँदै गयो । उनका सामान्य गतिविधि पनि युट्युबमा आउन थाले । यसबीच झापामा अशोकको घर बनाउने अभियान चल्यो । गरिब परिवारमा जन्मिएका अशोकको रेखदेख गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीले गर्न थाले । उनले अशोकसँग सम्बन्धित भिडियोहरू लगातार युट्युबमा हाल्न थाले । सांगीतिक कार्यक्रमकै लागि अशोक नेपालका केही सहरसहित दुबई तथा मलेसिया पनि पुगे । उनको घर बनाउने अभियानमा देश, विदेशबाट सहयोग रकम जुट्दै गयो । यसबीच घटनाले नयाँ मोड लियो । पत्रकार श्यामहरि शिवभक्ति र किशोर श्रेष्ठले अशोकको घर बनाउने तथा जग्गा गरिद गर्ने क्रममा आर्थिक हिनामिना भएको बताउँदै प्रश्न उठाए । घर बनाउने रकम पारदर्शी नभएको बताउँदै उनीहरूले रिपोर्ट बनाए ।
फिल्मीकुरा टिभीका श्यामहरि तथा स्थानीय पत्रकार किशोरले जतिजति यो विषयसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण गर्दै गए, विवाद त्यति नै चर्कंदै गयो । टंक बुढाथोकीका दाइ टीकाले यस विषयमा प्रेस मिट नै गरे । तैपनि स्थिति साम्य भएन । अशोक दर्जीको पढाइ बिगारेर विभिन्न कार्यक्रममा दौडाएको, आफ्ना लागि पैसा कमाउन उनको प्रयोग गरिएको जस्ता आरोप थोपरिँदै गए । यसबीच टीका बुढाथोकी र अशोकले पढ्ने विद्यालयका प्रिन्सिपल दीपक न्यौपानेबीच भएको फोन वार्ता बाहिरियो, जसमा अशोकलाई कसरी प्रयोग गरी कमाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । त्यसमा यो विषय उठाउने पत्रकारलाई भुस्याहा कुकुर भनेर गाली गरिएको थियो । आफ्नो बचाउ गर्दै टीकाले फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्‍यो । ‘आफू चर्चामा आउन र पैसा कमाउन अशोकलाई प्रयोग गरिएको छ ।’ पत्रकार श्यामहरि शिवभक्ति र किशोर श्रेष्ठ एकसाथ भन्छन्, ‘उनको पढाइ बिगारिदैछ ।’ तर यो कुरा टीका र टंक बुढाथोकी स्वीकार गर्न तयार छैन । घर बनेपछि सबै हिसाबकिताब देखाउने बाचा उनीहरूले दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत अशोकको प्रतिभा बाहिर आउनु राम्रो पक्ष भए पनि अनावश्यक प्रचारप्रसारले अशोकलाई मनोवैज्ञानिक रूपले असर पर्ने बताउँछिन्— बालमनोविज्ञ नन्दिता शर्मा । बढी प्रचारप्रसार गर्नतिर लाग्नुभन्दा उसलाई संगीत सिकाउन तथा पढाइ–लेखाइमा केन्द्रित गराउन लाग्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।
०७५ कार्तिक २१ गते बुधबार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर ०७ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस
०७५ कार्तिक २२ गते बिहिबार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर ०८ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस
सायद भोलि मेरो लास आउँछ भन्दै फोन गरेपछि…
मेरो ठुलो सपना स्कुटी किन्नु हो भन्दै झोला भरि सिक्का बोकेर शोरुप पुगे यी ब्यक्ति (भिडियो सहित)
टिकटकबनाउनेलाई आयो खुशीको खबर: अब नेपालमा पनि टिकटकबाट र्झने भयो पैसा !